Teknolojia sy fandriam-pahalemana :: Hanampy amin’ny fanaraha-maso eto an-drenivohitra ny orinasa Huawei • AoRaha
Teknolojia sy fandriam-pahalemana Hanampy amin’ny fanaraha-maso eto an-drenivohitra ny orinasa Huawei
Hiampita any amin’ny fampiasana fitaovana informatika sy elektronika amin’ny hetsika fampandriana fahalemana ny mpitandro filaminana eto an-drenivohitra. Tapaka nandritra ny dinikasa niarahan’ny tompon’andraikitra maromaro avy ao amin’ny orinasa Huawei eto Madagasikara, notarihin’ny tale jeneraly lefitra, Belahy Jean sy ireo teknisianina avy eo anivon’ ny Ofisy ho an’ny fampitam-baovao eo anivon’ny miara­mila (Otme), tetsy amin’ny foibeny eny Fiadanana, fa hiara-hiasa amin’ny fametrahana fakàna horonantsary amin’ny fanaraha-maso ny faritra sasantsasany eto Antananarivo renivohitra ny roa tonta.
Ny orinasa Huawei no hiantoka ny fitaovana. Eny amin’ireny andrin-jiro ireny no hametahana an’ireo fakàna horonantsary. Ny teknisianina ao amin’ny Otme kosa no hikirakira ny fandraiketana sy fampia­sana an’ireo horonantsary. Hahazo fampiofanana mano­kana izy ireo. Hatomboka amin’ny fanisana an’ireo faritra mena tokony hametrahana izany eto an-drenivohitra ny asa mba hahafahana mamaritra ny isan’ireo fitaovam-pakana horonantsary sy ny tetibola ilaina.
« Hanamora ny fikarohana an’ireo mpanao asa ratsy sady hanampy betsaka amin’ny fanamafisana ny fandriampahalemana izao tetikasa izao. Nahazoana vokatra tsara hatreto ny fampiasana azy ireny ka tokony hotohizana”, hoy ny jeneraly Rafaliarison Fidimalala, tale jeneralin’ny Otme.